musha > Travel Europe > 10 Romantic Cities To Visit In Germany
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 20/12/2019)
Europe ndiyo yakanakisisa rwendo nokuti kudanana guta uchapukunyuka. zvisinei, inzvimbo huru, uye yaungada kuderedza pasi. sezvinei, pane zvakawanda nezvako Germany, kunyanya ayo Maguta da nemisha. Wadii kutora wako waunoda parwendo havazombokanganwi? Kukubatsira kusarudza kuenda kupi, pano vari 10 maguta uchidanana kushanyira muGermany:
A Romantic City: Rothenburg Ob the Tauber
Rothenburg ndiye vedu vokutanga pandandanda Romantic Cities To Visit In Germany, Zviri fairytale guta chakakwana chinokwezva mamiriyoni Vashanyi pagore. zvisinei, kana iwe shanyira, uchaona nei nevakawanda zvakadaro. Umbwa munguva yeMiddle Ages nguva, kutuswa yemifananidzo asingaverengeki Makatuni mabhaisikopu, Rothenburg ndiro guta uye guta Romantic iwe haazokanganwi.
Bamberg ndiro guta German zvikomo nomwe, zvikuru kufanana Rome muna Italy. Uye kungofanana Roma, guta rino rudo ruzere naka nenhoroondo akitekicha uye maonero kuti ichakukura iwe retsoka dzenyu. Chii chimwe, Bamberg ane "Little Venice" dunhu yayo, iyo inopa mukana kutora Gondola kukwira.
Pedyo kuguta Aachen, Monschau ane zvose: wakajeka maonero, munhu ichitenderera, rwizi, uye rakaisvonaka Castle, uye rudo. Chii chinoita kuti munhu akakwana Romantic Cities To Kushanya MuGermany kuenda nokuti vanoda muviri wayo vazhinji Hiking mudungwe munzira kumakomo. Uyezve, kana iwe shanyira muchando, uchakwanisa kunakidzwa ayo chinyakare Christmas musika.
Meissen anogara pachigaro Elbe rwizi, uye guta mukuru yose Saxony uye A Romantic City. The Elbe Mupata ndiko achiposa Meissen kudanana nyaya yakadaro. zvisinei, pane zvakawanda kuona, akadai yayo yakanaka tsvuku matenga kuti vari nowenyika Prague. Uyezve, vanoda akitekicha vanogona kunakidzwa kusora rakaisvonaka Gothic Cathedral ane rechi16 remakore Castle.
Berlin kuna Meissen Zvitima
Freiberg kuna Meissen Zvitima
Cottbus kuna Meissen Zvitima
Chemnitz kuna Meissen Zvitima
Heidelberg ndekwaunogumira wakakwana kana uchida kunzwa mweya Romanticism tichinakirwa runako muguta rino. Chii chimwe, unogona dzinotibatsira Castle matongo pachikomo uye tora remba achitevedza Neckar rwizi nemunhu wawaida.
Kana muchitsvaka kuine nguva apo kutsvaka Romantic Cities To Visit In Germany, tarisa mberi pane Freiburg, pamahombekombe yakakurumbira Black Forest. Kuti pedyo nomuganhu Siwizarendi, ungatarisira Vakamupfekedza maonero uye nehova anoshamisa kunze kweguta. Freiburg akakwana kushanyira gore rose.
Sea-zvitema mvura Bodensee Lake uye Alps komberedza Lindau. Pano unogona kunakidzwa zvinoshamisa maonero, uyewo zvakasiyana mvura mitambo chikepe nzendo, uye vamwe Romance. Uyezve, Lindau akanaka munguva yechando, kunyanya kana Bodensee yaita chando.
Mushori ndiro guta mukuru muGermany, Zviri pandandanda Romantic Cities To Visit In Germany, asi chete saka unoziva zviri pedyo kwazvo Luxembourg, vamire pamahombekombe pamusoro rwaMoselle rwizi anopfuura zviuru zviviri zvemakore. Kuenzanisira runako kwayo, Mushori Anozvirumbidza akitekicha Roman, uyewo Ages uye Gothic zvivako. Nemamwe mashoko, ichi yakasiyana sanganisa anoita mushori chinoshamisa zvechokwadi.
Koblenz kuna mushori Zvitima
MuFrankfurt kuna mushori Zvitima
WokuMainz kuna mushori Zvitima
Stuttgart kuna mushori Zvitima
A Romantic City anonzi: Cochem
Kana uri kuenda sorwizi rwendo muGermany, nechokwadi kuti unosanganisira Cochem somumwe Kumira kwako. yemizambiringa and a breathtaking 11th century castle are the main features of this river town and a very romantic city.
MuFrankfurt kuti Cochem Zvitima
Bonn kuti Cochem Zvitima
Cologne kuti Cochem Zvitima
Stuttgart kuti Cochem Zvitima
duku iyi Ages dhorobha inogona kuverengwa pandandanda Romantic Cities To Visit In Germany, guta rino Achatora mweya wenyu wayo fadza cobblestone migwagwa uye sokunofadza dzimba. Uyezve, vanoda Nhoroondo vachanakidzwa kuongorora nhoroondo yacho yakasiyana. Sezvo achizorora nzvimbo King Heinrich I, Quedlinburg iguta chinokosha.
Berlin kuti Quedlinburg Zvitima
Hanover kuti Quedlinburg Zvitima
muMagdeburg kuti Quedlinburg Zvitima
Bielefeld kuti Quedlinburg Zvitima
Wati wasarudza izvo Romantic Cities kushanyira muGermany uchida tora sezvo yako inotevera uchapukunyuka? Ronga rwendo kune mumwe 10 vakawanda kudanana maguta muGermany uye Book Your Train Tickets pamusoro nguva Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Romantic Cities To Visit In Germany” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fromantic-cities-visit-germany%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#germanytravel europetravel eurotrip da romanticdestinations trainjourney traintip Train Travel